Fiarovana tontolo iainana :: Halefa etsy Ambodivona ny "Île était une fois" • AoRaha
Fiarovana tontolo iainana Halefa etsy Ambodivona ny « Île était une fois »
Miezaka manolotra ny anjara birikiny amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ny mpikirakira sarimihetsika malagasy. Isan’izany ny Endemika Film, izay hanolotra ny horonantsary fanadihadiana « Île était une fois ». Amin’ny 12 marsa ho avy izao no nampahafantarina etsy amin’ ny Cinepax Ambodivona izy ity.
Vokatra hafa ny « Île était une fois ». Fampifangaroana ny boky mirakitra ny dia sy ny horonantsary fanadihadiana izy io. Raha aravona izany dia ny lalana sy fivezivezena notanterahin’ ny mpamolavola sy mpamorona ny horonantsary, Lova Nantenaina, no raiketin’ity horonantsary ity. Tsy Madagasikara ihany, noho izany, fa ao ihany koa La Réunion, izay toerana nanaovana ny asa fandrafetany ny horonantsary.
Raha fintinina fanomezana vahana sy fampahafantarana an’ ireo fomba amam-panao nentindrazana malagasy sy avy atsy La Réunion, izay mifamatotra bebe kokoa amin’ny tontolo iainana izy io. Izany fifamatorana izany avy eo no hanentana ny rehetra mba hiaro ny tontolo iainana izay harena lehibe tokoa ary miantoka ny fahaveloman’ny olombelona tsirairay. Manantena ny mpamolavola fa hipaka any amin’ny mpankafy horonantsary fanadihadiana ny hafatra tiany ampitaina.
Ady amin’ny fanolanana :: “Aoka izay ny herisetra. Ampy izay ny fahanginana”, hoy Rajoelina Mialy
Tan-tsoroka hoan’ny tantsaha :: Tokantrano enina arivo mahery misitraka ny Asa avotra mirindra